Mitadiava, dia hamaly anao Andriamanitra (1)
"(Hoy Jesosy:) Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondòny, dia hovohana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohana." Lioka 11: 9, 10
“Teraka tany Belzika aho, tao amina fianakaviana marôkana silamo. Tsy nanery ahy na oviana na oviana hanaraka ny fanaony ara-pivavahana ireo ray aman-dreniko. Nefa nangetaheta aho ny hisian’Andriamanitra teo amin’ny fiainako, ary rehefa mba sendra mivavaka aminy aho, dia mangatsiaka hatrany ny foko. Ny foto-kevitra nijoroako dia ny hoe : tsy olona ratsy aho, tsy manao ratsy olona, tsy manana fahavalo, tsy mangalatra. Nefa rehefa nandeha ny fotoana, dia nanomboka nanao zavatra nanameloka ahy tanteraka teo anatrehan’Andriamanitra aho.
Nanjary tsapako ny vesatry ny fahotako, ary izay fotoana izay no nofidin’Andriamanitra hanehoany ny tenany tamiko. Nandia fotoan-tsarotra aho, na dia fiainana vaovao aza no nisokatra teo anatrehako, satria nandao ny tokantranon’ny ray aman-dreniko ary nanjary nahaleo tena.
Tamin’izay fotoana izay dia nisy kristiana iray fantatro, niresaka tamiko matetika ny amin’i Jesosy. Nahasorena ahy izany, ary tsy andriko ny hahavitan’ny kabariny. Hoy hatrany izy tamiko: “Mitadiava, dia hamaly anao Andriamanitra”. Nony farany dia nanaiky hitady aho, ary nanomboka hatreo dia nisy zavatra nanakana ahy tsy hiaina toy ny teo aloha intsony. Tahaka ny hoe nanao dingana iray tafahoatra aho, tsy tsapako akory, ka tsy afa-nihemotra intsony.
Rehefa nanomboka namaky ny Baiboly aho, dia toy ny hoe nanota. Nefa aho tamin’izany dia nomen’Andriamanitra valinteny, saingy tsy nety nanaiky ireny. Nanapa-kevitra hivavaka aho, nangataka tamin’Andriamanitra hampahafantatra ahy ny marina. Nisokatra tsikelikely teny ny foko, ary afaka nametraka tao ilay hany fahamarinana tokana Andriamanitra.”